Guddoomiyaha Jaamacadda Hargeysa oo ka hadlay Lacago lagu kordhiyay Ardayda Jaamacaddaas | Somaliland.Org
Guddoomiyaha Jaamacadda Hargeysa oo ka hadlay Lacago lagu kordhiyay Ardayda Jaamacaddaas
September 30, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)-Guddoomiyaha Jaamacadda Hargeisa Dr. Xuseen Cabdilaahi Bulxan, ayaa ka hadlay Lacago lagu kordhiyay Lacagta laga qaado Ardayda dhigata Jaamacadda Hargeisa. Taas oo ay dareen diidmo ka muujiyeen Ardayda Jaamacaddaasi.
Inkasta oo aanay Ardayda Jaamacadda Hargeysa si caam ah uga hadal arrintan, haddana toddobaadyadii laga soo gudbay waxa Jaamacadda Hargeisa ka taagnaa muran salka ku haya Lacag lagu kordhiyay Ardayda Jaamacadda oo qaddarkeedu dhan yahay 50 Dollar ardaygiiba, taas oo la sheegay in qayb ka noqon doonto kor-u-qaadista tayada Jaamacadda. Hase ahaatee, ardayda Jaamacadda ayaa diidmo ka muujiyay arrintan.
Guddoomiyaha Jaamacadda Hargeisa Dr. Bulxan oo ka hadlay Lacag-kordhintan, ayaa sheegay in aanay keli ku ahayn Ardayda ee sidoo kale Lacagta lagu kordhiyay Maamulka Jaamacaddaas. Waxaanu sheegay in Ardayda iyo Maamulka Jaamacadduba ay diideen Lacagta la kordhiyay. “Waxa lagu kordhiyay Lacagta Ardayda iyo Maamulka Jaamacaddaba..Ardaydii iyo Maamulkiiba way diideen, diidmana kama aha ee waxaanu ka war haynaa in uu dalka ka jiro culays dhaqaale. Waliba qolada Maamulka Jaamacaddu waxay islahaayeen haddii wax la kordhiyay, idinkana waxbaa idiin kordhay. Laakiin, waanu ka dhaafnay Lacagtaas.” Ayuu yidhi Dr. Bulxan oo habeenimadii Isniintu soo galaysay ka hadlayay Xaflad Xisbiga UCID u qabtay Ardayda Jaamacadaha Hargeisa.
Guddoomiyaha Jaamacadda Hargeisa oo si qoto-dheer uga waramay adeegyo iyo Maaddooyin ay ku soo kordhiyeen Jaamacadda, ayaa sheegay in ay isla qaateen Maamul ahaan in Lacagtaas lagu kordhiyo Ardayda cusub ee Jaamacadda ku soo biiraysa sanadkan. “Kooxda cusub ee sanadkan soo galaysa Jaamacadda ayaanu waxoogaa ku daraynaa. Sababtoo ah, maadaama ay yihiin kuwo cusub waxa loo baahan yahay in tayada waxbarashada la kordhiyo.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha Jaamacaddu. Waxaanu xusay in ay Jaamacadda Hargeysa keeneen Macallimiin Ajaanib ah oo wax ka dhigi doona. Isla markaana uu guddoomiye ahaan isagu bil ka dib uu socdaal ugu kicitimi doono Dalka Maraykanka oo uu sheegay in uu xidhiidh midayn ah la samayn doono Jaamacadaha dalkaas qaarkood.